တရုတ်စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသည့် Suture ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Weirui
1. Nylon Monofilament Monofilament, ဒြပ်, စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောချုပ်ထားခြင်း, အနက်ရောင်, အပြာသို့မဟုတ် undyed အရောင်။ polyamide 6.0 နှင့် 6.6 ကိုတူညီသော cylindrical diameter နှင့်အတူ extrusion မှရရှိသည်။ တစ်ရှူးတုံ့ပြန်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်လွန်သည်စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအချိန်ကာလအားဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုအားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
1. နိုင်လွန် Monofilament
Monofilament, ဒြပ်, စုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောချုပ်ရိုး, အရောင်အနက်ရောင်, အပြာသို့မဟုတ် undyed ။
polyamide 6.0 နှင့် 6.6 ကိုတူညီသော cylindrical diameter နှင့်အတူ extrusion မှရရှိသည်။
Hydrolytic လုပ်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်ဓာတုအဆက်အသွယ်များပြတ်တောက်မှုကြောင့်ချည်ထုထည်ထုထည်ပမာဏခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင် ၁၀% ခန့်လျော့နည်းသွားကြောင်းလူသိများသည်။
အရောင်ကုဒ်: အစိမ်းရောင်တံဆိပ် （PANTONE 360C） ။
ဒြပ်ဇာစ်မြစ် （အဓိကအရည်အသွေးကုန်ကြမ်း） INERT ။
Monofilament (ယူနီဖောင်းမီလီမီတာ gage) ။
အထွေထွေ, မီးယပ်, သားဖွား, မျက်စိအထူးကု, အာရုံကြော, အရံ micro- သွေးကြောခွဲစိတ်ကုသ, အရိုးအထူးကုနှင့်အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသ။
ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်သည်ဤဆပ်ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသိပြီးကောင်းမွန်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိုကျင့်သုံးပါကစုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိသောမြင့်မားသောဆန့်အားအားကောင်းသောထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသောအပ်ချုပ်အားအကြံပြုထားသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဒြပ်, မစုပ်ယူ, monofilament suture ။
in vivo ရှိ polypropylene သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ၎င်း၏ခိုင်မာအားကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ, အမြဲတမ်းထောက်ခံမှုအဖြစ်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်းများအတွက်စံပြ။
အရောင်ကုဒ်: အပြာရောင်တံဆိပ် ANT PANTONE 652C） ။
အထူးကုဒေသများရှိတစ်သျှူးများကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ Cuticular နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအရေးအပါဆုံးအကြားဖြစ်ခြင်း။
အလွန်ကောင်းသည့် plastodeformation ..
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်အသုံးပြုရန်အထူးအပ်များ (အပ်များနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာကိုကြည့်ပါ) ။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ပလပ်စတစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အူမကြီးခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊
အသုံးပြုသူများသည်ဤ suture ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသိပြီးကောင်းမွန်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိုအသုံးပြုပါကအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုစုပ်ယူမှုမရှိသောချည်တစ်ချောင်းနှင့်ဒြပ်ဆွဲအားမြင့်မားသောဒြပ်ချုပ်ချုပ်နှောင်ထားသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. Polyester braided
ဒြပ်စင်, မစုပ်ယူ, multifilament,
အဖုံးနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ terephthalate ၏ Polyester ပေါင်းစပ်။
ယင်း၏စရိုက်လက္ခဏာမြင့်မားဆန့အစွမ်းသတ္တိကြောင့်တစ်ရှူး coaptation အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အရောင်ကုဒ်: အစိမ်းရောင်တံဆိပ် （PANTONE 3288C） ။
ထပ်ခါတလဲလဲ flexion မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အက္ခရာတင်ထားသော Multifilament ..
၎င်းသည်လုပ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ညွှန်ပြသည်။ ယင်းတို့တွင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ မျက်စိအထူးကုခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်အထွေထွေခွဲစိတ်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အသုံးပြုသူများသည်ဤ suture ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသိပြီးကောင်းမွန်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိုအသုံးပြုပါကအသုံးပြုသူများသည်၎င်းကိုစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသော၊ ဆန့်အားမြင့်မားသောဒြပ်ဆွဲအားဖြင့်မစုပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းနှင့်ဒြပ်ချုပ်ချုပ်များကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
Bombyx Mori I ပိုးပိုးကောင်၏ပိုးအိမ်မှရရှိသည်။
တစ်ရှူး encapsulation တွေကိုဖြစ်ပေါ်သည်အထိလျော့နည်းသော်လည်းတင်းမာမှုအချိန်မှတဆင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အရောင်ကုဒ်: အပြာရောင်တံဆိပ် （PANTONE 2995C） ။
urologic လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှလွဲ။ တစ်ရှူးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဆက်ဆံမှုများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ:
အနက်ရောင်အရောင် (silicone နှင့်အတူချည်) ။
အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှု, အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါ, မျက်စိအထူးကု, မီးယပ်နှင့်သားဖွားမီးယပ်။
အသုံးပြုသူကဒီ suture ပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်သိတယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောခွဲစိတ်ကုသမှုကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကခွဲစိတ်ဆရာဝန်က၎င်းကိုစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသော၊ ဆန့်နိုင်အားမြင့်မားသောဒြပ်ဆွဲအားဖြင့်မစုပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုနှင့်ဒြပ်ချုပ်ချုပ်ထားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Monofilament၊ သံမဏိ၊ စုပ်ယူမှုမရှိသောချုပ်ထားခြင်း။
အရောင်ကုဒ်: မီးခိုးရောင်တံဆိပ် （PANTONE 7539C） ။
Sternal Closure Surgery အပါအဝင်အရိုးအထူးကုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
အသုံးပြုသူသည်သံမဏိချုပ်၏စရိုက်လက္ခဏာများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုသိပြီးသူ / သူမသည်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါကဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းလိုအပ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်လုံလောက်သည်၊ ဥပမာအရိုးအထူးကုဆရာဝန်၊ Sternum စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ရှေ့သို့ စက်ရုံစျေးပေါသော Hot Car First Aid Kit - နာမည် - ကဒ် - ဆေး - လက်ပတ်ကြိုး - WeiRui
နောက်တစ်ခု: စုပ်ယူနိုင်သော Suture ကို